Maxaa ka Ogtahay Heshiiska ay kala saxiixdeen dowladaha Soomaaliya iyo Sweden? +SAWIRRO | HalQaran.com
Maxaa ka Ogtahay Heshiiska ay kala saxiixdeen dowladaha Soomaaliya iyo Sweden? +SAWIRRO
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga , Mudane Danjire Axmed Ciise Cawad, ayaa ku saxiixay Muqdisho xalay fiidkii oo Axad ahayd ( 1 December) heshiis is-afgarad Akadeemiyadda loo yaqaan Folke Bernadotte Academy (FBA) iyadoo ay goob-joog ka ahaayeen Safiirka Sweden ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Staffan Tillander, diblomaasiyiin Soomaali iyo Sweden.
Agaasimaha guud ee FBA Mudane Sven-Eric Söder ayaa saxiixay heshiiska oo sare loogu qaadayo wax wadaag istiraatiijiyadeed dhinacyo badan leh oo u dhexeeya labada dal ee saaxiibada.
Danjire Axmed Ciise Cawad
Sweden iyo Somaliya oo heshiis kala saxiixday